Yakakwirira-chaiyo okisijeni sensor, dhijitari yekuratidzira mhedzisiro, yakanyanya kurongeka, hupenyu hurefu hwesevhisi, chimiro chiri nyore, mashandiro ari nyore, haafanire kuverenga, mashandiro epaneru, kudzvanywa kwegasi, nzira yekuratidzira, yakarurama, yakaringana, yakavimbika, yakakwirira, inotorwa kunze kwenyika Oxygen analyzer controls. kuyerera kweokisijeni.
Iyo DRK218 voltage breakdown test chiridzwa inodzorwa nekombuta kutonga.Kuburikidza neiyo nyowani yakangwara yedhijitari yakasanganiswa yedunhu system yakazvimiririra yakagadziridzwa nekambani yedu, iyo Software Kudzora System inopedzwa.
DRK110B Mvura Yekunyura Meter
DRK110B bepa kunyudzwa kwemvura chiridzwa chekugadzira nekugadzira zvichibva pane tekinoroji paramita uye tekinoroji zvinodiwa zvinotsanangurwa mudunhu.
DRK250 Constant Temperature uye Humidity Bhokisi
DRK250 Muchina uyu unoteedzera dzakasiyana siyana dzezvakatipoteredza, kuyedza zvigadzirwa zvakasiyana-siyana uye mbishi zvinhu zvekupisa kupisa, hunyoro kuramba, kushinga kuramba, uye kushomeka kwekushisa.Inokodzera mapepa, kudhinda, zvemagetsi, zvemagetsi, simbi uye mamwe maindasitiri.
DRK251 Kuchembera Bhokisi
DRK251 Thermal Index Test Chamber inokodzera bvunzo yekudzivirira kupisa, zvikamu zvemagetsi, uye zvigadzirwa zvepurasitiki zvemagetsi ekudzivirira zvinhu.
DRK252 Drying Bhokisi
Kambani yedu yakagadzirwa neDRK252 yekuomesera bhokisi, zvinhu zvakanakisa, hunyanzvi hwekuita, uye yakanyatso gadzirwa zvinoenderana neakakodzera zviyero zvemidziyo yekuyedza.